Imandarmedia.com.np: प्रचण्डले किन गरे हेडक्वार्टर विघटन ? पत्ता लाग्यो कारण
Bhaktpur Khabar, Big News, Main News, Political » प्रचण्डले किन गरे हेडक्वार्टर विघटन ? पत्ता लाग्यो कारण
सचिवालयलाई सशक्त बनाउने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय हेडक्वार्टर विघटन गरेको छ । २०७३ जेठमा विभिन्न पार्टीसँग एकता गर्दै माओवादी केन्द्रले ३३ सदस्यीय हेडक्वार्टर गठन गरेको थियो । जसलाई पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो अंग बनाइएको थियो ।
Trending : Bhaktpur Khabar, Big News, Main News, Political